प्रचण्डको भिन्न तयारी,संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट किन भने ? - Sankalpa Khabar
3. मेरा पिकमा फसेका पाँच आरोही तथा पदप्रदर्शकको उद्धार
6. आज पनि तीन प्रदेशका केही स्थानमा वर्षाको सम्भावना
काठमाण्डौं । फुटेर छिन्न भिन्न भएको माओवादी पुन जुटाउने तयारीमा नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लागेका छन । चुनाव अघि नै माओवादी जति एक पार्ने तयारीमा उनी जुटेको माओवादी स्रोतको दावी छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले हालै मात्र एक अभिब्यक्ति दिएका छन–संविधान हामीले शतप्रशित मानेको होइन,यसमा हाम्रो नोट अफ डिसेन्ट छ । हालै भएको केन्द्रीय समितिको वैठकमा उनले यो पाराले माओवादी चल्दैन मात्र भनेनन यस्तै गरि पार्टी चलाउने हो भने विघटन गरौं सम्म भने । आखिर प्रचण्डले यसो किन भने त ? खासमा प्रचण्ड यतिवेला पार्टी विस्तारको तयारीमा छन । उनी पुर्वमाओवादीलाई समेटने योजनामा जुटेका छन ।
माओवादी स्रोतका अनुसार,प्रचण्डले यसवीचमा विप्वलव देखि वैद्यसम्म सम्वाद गरिसकेका छन । नेत्रविक्रम चन्द यतिवेला पनि जनमतसंग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवादमा जाने बताइरहेका छन । विप्लव र प्रचण्ड सहमतिको नजिक पुगेको बताइन्छ । यहि वीचमा मोहन वैद्य किरणसँग भएको वार्ता पनि सकारात्मक मोडमा पुगेको बताइएको छ । विप्लव र वैद्यसँग एकताको लागि ढोका खुल्ला गर्नको लागि नै प्रचण्डले पछिल्लो वैठकमा संविधानमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको भनेर वताएको बताइएको छ ।
प्रचण्ड अरु त अरु गोपाल किरातीसँग समेत सम्वाद गरिसकेका छन । चुनाव अघि नै पूर्वमाओवादी जुटाउने र कम्तिमा चार वटा घटकसँग मोर्चावन्दी गरेर चुनावमा जाने तयारीमा छन । विश्वस्त स्रोतका अनुसार कांग्रेससंग चुनावी मोर्चा हुन कठिन छ भन्ने प्रचण्डले वुझेका छन । यसैले,निश्चित स्थानमा चुनावी गठवन्धन गर्ने खाका बनाएर प्रचण्ड बसेका छन ।
गृहले ग‌‍‍‍र्‍याे सिडियोको सरुवा,काे-कहाँ ?
३१ आश्विन १९:५७
वाग्मतिमा अबको नेतृत्वबारे छलफल गर्न गठबन्धनको बैठक बस्दै
४ कार्तिक ०७:३२
प्रधानसेनापति शर्मा र राजदूत भोल्कबीच भेटवार्ता
३ कार्तिक १८:४४
दुहबी सबस्टेसन ३८ घण्टापछि सञ्चालनमा, विद्युत आपूर्ति सूचारु
४ कार्तिक १४:४८
३१ आश्विन २०:२०
५ कार्तिक ०६:३९